Ukuba usemzuzwini apho ufuna ukuba uThixo akuphilise kwaye akuncede uphilise umntu omthandayo, apha siza kukufundisa umthandazo ophilisayo ezokukunceda kula maxesha anzima.
Ukuthandaza kusisondeza kuThixo iNkosi yethu, xa sifuna uncedo uza kuza kuthi
1 Umthandazo wokuphilisa, uza kuwusebenzisa nini?
2 Umthandazo wokuphilisa
2.1 Umthandazo wokuphilisa impilo
2.2 Umthandazo wokuphilisa umntu ogulayo
2.3 Umthandazo wokuziphilisa
2.4 Umthandazo wokuphilisa kunye nentsikelelo kwabagulayo
Umthandazo wokuphilisa, uza kuwusebenzisa nini?
Kwindawo yokuqala, kwibhayibhile basixelela ngeendlela ezininzi zokuphilisa ezenziwa yiNkosi yethu uYesu Krestu, olona nyango lukhulu alwenzileyo kukusindisa imiphefumlo yethu, ngokuzinikela ekusisindiseni ezonweni zethu. Kwangokunjalo waphilisa imilwelwe ababelala kuyo, oomama abangenabantwana, nabangaboniyo.
Ngokunjalo nakwivangeli nganye ebhalwe ebhayibhileni, basixelela ngendlela uYesu ngalo lonke ixesha wayesemhlabeni ephilisa kwaye enceda abanye. Ngemimangaliso kunye nokunikezela ngezipho ezikhethekileyo. Kodwa ngaphezu kwayo yonke into wayesindisa abagulayo.
UYesu kwindlela yakhe yokuphilisa waphilisa abaneqhenqa, abantu ababeneziphene, umkhuhlane, ubumfama, abagulayo kunye nezithulu phakathi kwezinye izifo. Wayengenandlela yokulandela xa ekhetha umntu oza kumphilisa, ngamanye amaxesha abagulayo beza ngqo kuye kwaye ukuba akunjalo, usapho lwaluza kumcela uncedo.
Ngendlela efanayo, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku Umthandazo womfi Ukuba into oyifunayo kukuphilisa ilahleko yangoku kwaye awazi ukuba ungahlangabezana njani nentlungu ngale mithandazo uya kuba nakho ukuzikhulula.
NguYesu Krestu, ephilisa abagulayo kubantu bakwaSirayeli
Ngendlela efanayo, ukuba uzifumana ngexesha apho ungasazi ukuba ubhekise kubani, nokuba ngugqirha, umfundisi, ugqirha wengqondo. Okanye sele uye kubo bonke kwaye awazi ukuba wenzeni. Sincoma ukuba uthandaze kakhulu, ukhanyise amakhandlela, ubeke isibingelelo kunye neengelosi zakho kunye neengelosi ezinkulu, abangcwele kunye neentombi ozinikeleyo kubo kwaye ubabuze, ubabuze impilo yakho yempilo yakho kunye neyosapho lwakho.
Okulandelayo, hlala ukhumbula ukubuza ngokuthobekileyo, ngokusuka entliziyweni yakho apho iminqweno yakho iza kuzaliseka khona. UThixo uhlala enathi kwaye uya kuhlala esixhasa ngokusinika isandla sakhe esinobuhlobo, asithathe kwaye asogqume ngengubo yakhe engcwele yokukhusela.
Ngendlela efanayo yokuthandaza, kuya kufuneka uye kwindawo ethuleyo apho uziva uxolile, xa uthandaza kwaye unxibelelana noThixo.
Umthandazo wokuphilisa impilo
Lo mthandazo uza kusinceda sithethe noThixo simxelele ngezifo zethu, kunye nokugula kwethu, ngaloo ndlela simnike amandla okusithethelelela.
Nkosi, namhlanje ndikunika ingqondo yam, ukuba ndifuna ingqondo kaKristu kuzo zonke izinto ndikhululwe kuxhala kunye noloyiko olupheleleyo kunye nentlalo-ntle namhlanje ndikunika umoya wam kuwe ndizelwe ngokutsha uMoya wakho uhlala ngaphakathi kum .
Umoya wam uyaphila kuwe, ukhululekile kwiingcinga zokudakumba kunye nokucinga okunzulu, namhlanje ndikunika umzimba wam oyitempile enikezelwe kuwe, Owu Nkosi, indawo oza kuhlala kuyo ulawule.
Ukuze ndikwazi endikutyayo nendikutyayo, ukuze ndikwazi ukuhoya ukulala kwam nokuphumla. Nkosi, ngoku ndinikezela kuwe bonke ubukho bam ndibonisa ingqondo, umoya nomzimba wam.
Yiza undithabathe njengedini eliphilayo namhlanje kunye nayo yonke imihla endizukisa ngayo kwaye ndiyakuthanda.
Umthandazo wokuphilisa umntu ogulayo
Ngokunjalo, ukuba sinelungu losapho eligulayo okanye umhlobo, xa simtyelele singambamba ngesandla sithandaze lo mthandazo.
Nkosi yezulu, ndiyaphumla phantsi kwamaphiko akho amakhulu othando. Ndihlala ngaphakathi kwentliziyo yakho emnandi. Ndiyazi ukuba kukho ukuphilisa ekuphatheni kwakho. Ngeembandezelo zikaKristu ndingacela ukubuyiselwa kunye nokuthembela ngokulunga kwakho. UyiNkosi yam, uMsindisi wam, uMphilisi wam kunye nomhlobo wam. Ndihlala ekwamkeleni kwakho okuswiti.
Nje ukuba sikufumene ukuphiliswa, kufuneka kwakhona sifune ukuphiliswa.
Owu Thixo, ongokuphela komthombo wempilo kunye nokuphilisa, umoya wokuzola kunye noxolo oluphambili lwendalo iphela, ndinike ulwazi olunje ngobukho bakho kunye nobukho obujikelezileyo ukuba ndingakuvumela ukuba undinike impilo, ukomelela noxolo, ngoYesu Krestu iNkosi yethu.
Umthandazo wokuphilisa kunye nentsikelelo kwabagulayo
Lo mthandazo ngulowo ubonakalisiweyo ukuba uthandaze ngala maxesha oyiko olukhulu ebusweni besi sifo sikaCovid-19, uyakusinceda sigcine ukholo kunye nethemba liphezulu.
Inkosi mayisikelele kwaye igcine wonke umntu ongaphilanga namhlanje. Ngamana iNkosi ingabukhanyisa ubuso bayo kubo bonke abo balwa nempilo enkenenkene kunye nezifo zomzimba, zengqondo okanye zomoya.
Phakamisa ukukhanya kobuso bakho obuhle kubo bonke abasokolayo namhlanje, ngezifo ezahlukeneyo, ukuphazamiseka kunye neengxaki zempilo.
Ngamana angaphakama ngokunyanga emaphikweni akhe kwaye ajonge ngemfesane enzulu kunye nenceba kubo bonke abafuna amandla akhe namhlanje. Ngamana lungagalela ezintliziyweni zenu uxolo nothando oluphuma kuphela kuYise ngobuntu beNkosi uYesu Krestu esithandaza egameni lakhe.
Ngayo yonke le nto ingasentla, kuya kufuneka uyazi ukuba ngamanye amaxesha nokuba sithandaza kangakanani uThixo wethu unelinye ikamva lakho, hayi le uyifunayo, unobomi bomntu amthandayo ngexesha elingalindelekanga nokuba kunzima kuwe ukuyamkela, kodwa uyenza ngothando lwabantwana bakhe, kuba ikunika uxolo kwaye amandla ukuqhubeka nomendo wakho kwaye uqhubeke nokugcina ukholo lwakho, nto leyo eza kuqhubeka nokusigcina simile.
Ngokuqinisekileyo, kunzima ukwamkela iziphumo ezibi kodwa siyazi ukuba siyakuhlala sinokholo, iNkosi yethu uYesu Krestu yenza ngeendlela ezingaqondakaliyo, kwaye uhlala esenza isenzo ngasinye ukuphucula ezinye iinkalo zobomi bethu kwaye kufuneka samkele izigqibo nokuchongwa kwekamva.